Silicone Fekitori - China Silicone Vagadziri uye vanotengesa
Zvinhu zveSilicone zvinogamuchirwa nevanhu vese nekuda kweiyo yakachena uye yakapfava hunhu. Zvakawanda zvinhu zvesilicone zviyero zvekudya, zvinogona kushandiswa kune zvigadzirwa zvinobata chikafu. Mhando dzese dzezvimiro, dhizaini uye mavara anowanikwa kune zvinhu zvesilicone kuratidza kana kuratidza zvinoreva vagadziri, kunyangwe mweya uri mukati. Izvo zvinhu zvesilicone zvatinowanzo gadzira ndezve silicone wristbands kana zvishongo zvine kushongedzwa kwakasiyana, Makiyi emaketani, Nhare mbozha, Mari dzeMari uye mabhegi, Makapu, Makapu maLid anovhara, Coasters, zvimwe zvinhu zvekicheni uye ETC. Izvo zvinhu zvinogona kupfuura ese marudzi ebvunzo bvunzo neUS kana European Institution, ndapota ivai nechokwadi chekuti zvakachengeteka kushandisa zvinhu zvinobata chikafu. Mibvunzo yako inofanirwa kugadziriswa mukati maawa makumi maviri nemana nechikwata chedu chinobudirira. Iyo yepamusoro mhando, yemakwikwi mitengo, ipfupi yekugadzira nguva, uye basa rakanaka rinofanira kukuita iwe kugutsikana nehukama hwebhizinesi.
Silicone Coin Bhegi Keychain
Magnetic Chingoro Chevhudzi clip